စပိန်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်း၌ ယခုနှစ်၏ အကြီးဆုံးတောမီး ဆက်လက်လောင်ကျွမ်းလျက်ရှိ - Xinhua News Agency
စပိန်နိုင်ငံ၏ မြို့တော် မက်ဒရစ်မြို့အနီး Santa Maria de la Alameda မြို့ ၌ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ သြဂုတ် ၂၇ ရက်တွင် တောမီးငြှိမ်းနေသော ရဟတ်ယာဉ်တစ်စီးအား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
မက်ဒရစ်၊ သြဂုတ် ၁၇ ရက် (ဆင်ဟွာ)
၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်း စပိန်နိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးတောမီး သည် စားကျက်မြေနှင့် သစ်တော်များ ဟက်တာ ၁၀,၀၀၀ ဝန်းကျင် အထိ လောင်ကျွမ်းပြီးနောက် သြဂုတ် ၁၆ ရက်တွင် ဆက်လက်လောင်ကျွမ်းလျက်ရှိကြောင်း အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက သြဂုတ် ၁၆ ရက် တွင် အတည်ပြုခဲ့သည်။
သြဂုတ် ၁၄ ရက် နံနက်ပိုင်းက Avila ပြည်နယ်ရှိ Navalacruz နှင့် Cepeda မြို့ငယ်များအကြား လမ်းခုလပ်တွင် မော်တော်ယာဉ်တစ်စီး မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးနောက် ယင်းမီးသည် အနီးဝန်းကျင်ရှိ ကျေးလက်ဒေသသို့ ကူးစက် ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုများနှင့်အပူချိန် ၄၀ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်ကျော်ရှိနေခြင်းတို့က တောမီးအား ကီလိုမီတာ ၄၀ ထက်ကျော်အထိ ကူးစက်ပျံ့နှံ့သွားရန် အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့ပြီး Solosanchoမြို့၊ Sobedilloမြို့၊ Riofrioမြို့၊ Sotalboမြို့ နှင့် Villaviciosa မြို့များမှ လူ ၁၀၀၀ ခန့်ကို ဘေးလွတ်ရာသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
တချိန်တည်းမှာပင် စပိန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း ရှိ Cordoba မြို့နှင့် စပိန်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းရှိ Avila မြို့တို့အား ဆက်သွယ်ထားသော အရေးကြီးသည့် N-၅၀၂ လမ်းပိုင်းကို မီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့် ဒေသသတွင်းရှိ အခြားလမ်းများနှင့်အတူ လမ်းပိတ်ထားခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိတွင် စပိန်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များမှ အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးတပ်ဖွဲ့ ဝင် ၁၅၀ ဦး အပါအဝင် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၅၀၀ တို့က မီးကိုငြှိမ်းသတ်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ လေယာဉ် ၅ စီးနှင့် ရဟတ်ယာဉ် ၂ စီးအား ဖြန့်ချထားကြောင်း လည်း သိရသည်။
မီးလောင်ကျွမ်းရာမှ ထွက်ပေါ်လာသော ပြာမှုန့်များ သည် စပိန်နိုင်ငံ Comunidad de Madrid ဒေသ အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အချို့မြို့များပေါ်သို့ ကျရောက်ခဲ့ပြီး ကီလိုမီတာ ၁၂၀ ကျော်မှပင် မီးခိုးများကိုမြင်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
စပိန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း Andalusia ဒေသရှိ Montoro မြို့၌ အပူချိန် ၄၇.၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် စံချိန်တင်သည့်နေ့ နှင့် တစ်ရက်တည်းတွင် ယင်းမီးလောင်ကျွမ်းမှု စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်းမှာ စပိန်နိုင်ငံ၌ စံချိန်တင်ဖူးခဲ့သမျှထဲတွင် အမြင့်ဆုံး အပူချိန်ဖြစ်ပြီး စပိန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းနှင့် အလယ်ပိုင်း ၌ ရက်ပေါင်းများစွာ အပူချိန် ၄၀ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် ဝန်းကျင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Largest wildfire of the year still active in central Spain
MADRID, Aug. 16 (Xinhua) — The largest wildfire of 2021 in Spain was still active on Monday, after burning around 10,000 hectares of brush, woodland and pasture,agovernment delegate has confirmed on Monday.
The fire began between the small towns of Navalacruz and Cepeda in the province of Avila on Saturday morning, afteravehicle onaminor road caught fire. The flames then spread to the surrounding countryside.
Strong winds and temperatures of over 40 degrees Celsius helped the fire spreadafurther 40 km, leading to the evacuation of around 1,000 people from the municipalities of Solosancho, Sobedillo, Riofrio, Sotalbo and Villaviciosa.
Meanwhile, the important N-502 road, which links the cities of Avila (central Spain) and Cordoba (southern Spain) has been closed due to the fire, along with several local roads.
The flames are currently being fought by around 500 firemen, including 150 members of the Military Emergency Unit of the Spanish armed forces. Five aircraft and two helicopters have been deployed.
Ash particles fell in some outlying towns in the neighboring Comunidad de Madrid, while smoke was visible over 120 km away.
The fire began on the same day thatatemperature of 47.2 degrees Celsius was recorded in the town of Montoro, in Andalusia (southern Spain).
This is the highest temperature ever recorded in Spain, and comes after several days of temperatures of around 40 degrees Celsius in much of central and southern Spain. Enditem